Esta 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Mgbe ihe ndị a gasịrị, mgbe ọnụma Eze Ahazuirọs+ dajụrụ, o chetara Vashtaị+ na ihe o mere+ nakwa ihe e kpebiri a ga-eme ya.+
2 Ndị na-ejere eze ozi, bụ́ ndị ozi ya,+ wee sị: “Ka a chọtara+ eze ụmụ agbọghọ ndị na-amaghị nwoke,+ ndị mara mma,
3 ka eze họpụtakwa ndị nlekọta n’ógbè niile+ ọ na-achị, ka ha kpọkọta ụmụ agbọghọ niile, ndị na-amaghị nwoke, ndị mara mma, na Shushan bụ́ obí eze,+ n’ụlọ ndị inyom nke dị n’aka Hegaị+ bụ́ ọnaozi eze,+ onye na-elekọta ndị inyom; ka e nyekwa ha ihe e ji ahịa ha aka n’ahụ́.
4 Ọ bụkwa nwa agbọghọ nke ga-amasị eze ka a ga-eme ka ọ nọchie Vashtaị+ dị ka nwunye eze.” Nke ahụ dịkwa mma n’anya eze, o wee mee otú ahụ.
5 Otu nwoke, bụ́ onye Juu, bi na Shushan+ bụ́ obí eze, aha ya bụ Mọdekaị+ nwa Jeya nwa Shimeị nwa Kish onye si n’ebo Benjamin,+
6 onye e si na Jeruselem dọrọ n’agha,+ ya na ndị a dọtara n’agha bụ́ ndị a dọọrọ ha na Jekonaya+ bụ́ eze Juda n’agha, onye Nebukadneza+ eze Babịlọn dọọrọ n’agha.
7 O wee bụrụ onye na-elekọta+ Hadasa, ya bụ, Esta, nwa nwanne nna ya,+ n’ihi na o nweghị ma nna ma nne; nwa agbọghọ ahụ makwara mma n’ahụ́, dịkwa mma ile anya,+ ma mgbe nne ya na nna ya nwụrụ Mọdekaị kpọọrọ ya dị ka nwa ya nwaanyị.
8 O wee ruo na, mgbe a nụrụ ihe eze kwuru na iwu o nyere, mgbe a kpọkọtakwara ọtụtụ ụmụ agbọghọ na Shushan+ bụ́ obí eze wee nyefee ha n’aka Hegaị,+ a kpọgakwara Esta n’ụlọ eze ma nyefee ya n’aka Hegaị onye na-elekọta ndị inyom.
9 Nwa agbọghọ ahụ dị mma n’anya ya, nke mere na o nwetara obiọma*+ ya, o mekwara ngwa wee nye ya ihe a na-eji ahịa ya aka n’ahụ́+ ma na-enye ya nri pụrụ iche, sikwa n’ụlọ eze kpọnye ya ụmụ agbọghọ asaa a họrọ ahọ, wee kpọfee ya na ụmụ agbọghọ ya n’ebe kasị mma n’ụlọ ndị inyom.
10 Esta emeghị ka a mata obodo o si+ ma ọ bụ ndị bụ́ ndị ikwu ya, n’ihi na Mọdekaị nyere ya iwu ka ọ ghara ikwu ya.+
11 Kwa ụbọchị, Mọdekaị nọ na-ejegharị n’ogige ụlọ ndị inyom iji mara otú Esta mere nakwa ihe a na-eme ya.
12 Mgbe o ruuru nwa agbọghọ nke ọ bụla ịgakwuru Eze Ahazuirọs, mgbe e mesịwooro ya ihe niile e nyere n’iwu ka a na-emere ndị inyom ruo ọnwa iri na abụọ, n’ihi na ọ bụ otú ahụ ka oge a na-ahịa ha aka n’ahụ́ si abịa ná njedebe, a na-ete ya mmanụ e ji mea mee+ ruo ọnwa isii, teekwa ya mmanụ bọlsọm+ ruo ọnwa isii, jirikwa mmanụ otite ndị inyom hịa ya aka n’ahụ́;
13 ọ bụ otú a ka nwa agbọghọ na-adị gakwuru eze. A ga-enye ya ihe ọ bụla o kwuru, ka o wee jiri ya si n’ụlọ ndị inyom gaa n’ụlọ eze.+
14 Ọ ga-abata ná mgbede, n’ụtụtụ, ọ ga-alaghachi n’ụlọ nke abụọ nke ndị inyom nke Sheashgaz bụ́ ọnaozi+ eze na-elekọta, bụ́ onye na-elekọta ndị iko ya. Ọ gaghịkwa agakwuru eze ọzọ ọ gwụla ma eze ò nwere mmasị n’ebe ọ nọ ma kpọọ ya aha.+
15 Mgbe o ruuru Esta bụ́ nwa Abihel nwanne nna Mọdekaị, onye ọ kpọọrọ dị ka nwa ya nwaanyị,+ ịgakwuru eze, ọ rịọghị ihe ọ bụla+ ma e wezụga ihe Hegaị+ bụ́ ọnaozi eze, onye na-elekọta ndị inyom kwuru (n’oge ahụ niile ihe Esta na-amasị onye ọ bụla hụrụ ya).+
16 E wee kpọrọ Esta kpọgara Eze Ahazuirọs n’obí ya n’ọnwa nke iri, ya bụ, n’ọnwa Tibet, n’afọ nke asaa+ nke ọchịchị ya.
17 Eze wee hụ Esta n’anya karịa ndị inyom ndị ọzọ niile, nke mere ka o nweta ihu ọma ya na obiọma ya karịa ụmụ agbọghọ niile ndị ọzọ na-amaghị nwoke.+ O wee kee ya ákwà isi a na-eke nwunye eze ma mee ya nwunye eze+ n’ọnọdụ Vashtaị.
18 Eze wee meere ndị niile o ji mere ndị isi na ndị niile na-ejere ya ozi oké oriri, bụ́ oriri o meere Esta; ọ tọhapụkwara+ ndị mmadụ n’ógbè niile ọ na-achị, na-enyekwa ndị mmadụ onyinye dị ka akụnụba eze hà.
19 Mgbe a kpọkọtara ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke+ na nke ugboro abụọ, Mọdekaị na-anọdụ n’ọnụ ụzọ ámá eze.+
20 Esta emeghị ka a mata ndị bụ́ ndị ikwu ya na ndị obodo ya,+ dị nnọọ ka Mọdekaị+ nyere ya n’iwu;+ ọ bụkwa ihe Mọdekaị kwuru ka Esta na-eme, dị nnọọ ka mgbe ọ nọ n’aka ya.+
21 N’ụbọchị ndị ahụ, mgbe Mọdekaị na-anọdụ n’ọnụ ụzọ ámá eze, Bigtan na Tiresh, bụ́ mmadụ abụọ na-eje ozi n’obí eze, bụ́ ndị nche ọnụ ụzọ, were iwe wee chọwa ụzọ isi gbuo+ Eze Ahazuirọs.
22 Mọdekaị wee nụ ya ma kọọrọ ya+ Esta bụ́ nwunye eze ozugbo. Esta wee kọọrọ ya eze n’aha Mọdekaị.+
23 E wee nyochaa ma chọpụta ya, e wee kwụgbuo+ ha abụọ n’osisi;+ e mesịa, a nọ n’ihu eze dee ya n’akwụkwọ ihe ndị mere+ n’ụbọchị ndị ahụ.
^ Es 2:9*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D17%26Chapter%3D2%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl